ပံ့ပိုးမှုက USB 2.0
အများစုကကွန်ပျူတာများ 480 Mbit/s အချက်အလက်လွှဲပြောင်းမှုနှုန်းထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ USB 2.
သင်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို Windows ပရိုဂရမ်ဖိုင်ကိုနေရာများကိုကြည့်ရှုရန်ခဲ့ရလျှင်သင်တဦးတည်း oddity သတိပြုမိကြပေမည်။ တချို့ကလျှောက်လွှာဖိုင်များကိုကော်ပီပွားယူနှင့်အကြိမ်အရေအတွက်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, 64-bit Windows 8.
အသစ်မှတ်စုစာအုပ်မြတ်သောအားသွင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ကို standalone mode မှာလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, လက်တော့ပ်ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဟာအာဏာကိုထွက်ပေါက်မှ ပို.
ငါအဟောင်း ရရန်မည်သို့အသစ်တစ်ခုဖန်တီး, သင့်ဟောင်းစာမျက်နှာများ၏အပေါ် log မနိုင်
Active Directory:အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ပျူတာဖမ်းယူ | Windows ကိုစွယ်စုံကျမ်း
အသုံးပြုသူများသည်နှင့်ကွန်ပျူတာ (Active Directory - - အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ပျူတာ) ပိုပြီးမကြာခဏအသုံးပြုကြသည် ပူးတွဲပါ Active Directory ။ ဒီဖမ်းယူ-၌သင်တို့ကို Active Directory ထဲမှာတ္ထုစစျဆေးနှင့် configure ခွင့်ပြုသည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သော parameters တွေကိုများထဲတွင်အောက်ပါတ္ထုဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများနှင့်အဖွဲ့များ။ ဌာနခွဲ။ Group Policy ္တု။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖိုလ်ဒါနှင့်ပရင်တာ။ ဒိုမိန်းလွှဲပြောင်းစစ်ဆင်ရေးအခန်းကဏ္ဍ (ဆွေမျိုး ID ကိုမာစတာ, အခြေခံအဆောက်အအုံမာစတာ, ကောင်စီ emulator) ကျွမ်းကျင်။ ဒိုမိန်း functional level ကိုတိုးပှား။ Snap ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် console ထဲကဒေါင်းလုပ်လုပ်, ဒါမှမဟုတ်ဖိုလ်ဒါ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ Tools များ (အုပ်ချုပ်ရေး Tools များ) မှ run နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအ Active Directory စီမံခန့်ခွဲမှုဒင်္-in ကိုသားအပေါငျးပါဝငျသောတစ်ခုတည်း console ကိုဖန်တီးရန်လိုလားကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Active Directory စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မှာရှိသမျှစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတည်းင်းဒိုးကနေဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဒီဖမ်းယူ-အတွက်တ္ထုများ၏ parameters တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ထိုအခြေအနေတွင် menu ထဲကအရာဝတ္ထုကို click, Right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ Properties ကို (Properties ကို) ။ ဒိုမိန်းအဆငျ့မှာ, သင်စစ်ဆင်ရေးအခန်းကဏ္ဍကျွမ်းကျင်လွှဲပြောင်းနိုင်ပြီး, Right-ကိုနှိပ်ခြင်းအရာဝတ္ထုအပေါ် Active Directory - အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ပျူတာ (Active Directory - အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ပျူတာ) , သင်သည်အခြားဒိုမိန်းကိုချိတ်ဆက်နိုင်နဲ့ $ ရှိလြှငျ, တစ်ရူဘယ်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူသည် အများစုကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဖမ်းယူ run Active Directory - တ္ထုအချို့ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြောင်းလဲဖို့ - (အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ပျူတာ Active Directory) ကိုသာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးကိုဥပမာအားဖြင့်, ပျောက်ဆုံးကြောင်းကိုရှာဖွေသောအခါသုံးစွဲသူများနှင့်ကွန်ပျူတာ သေတ္တာ, properties ကို (ဂုဏ်သတ္တိများ) သင့်လျော်သော tab ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ switch ကိုဖမ်းယူရှိသမျှကိုမရရှိနိုင်တဲ့ options တွေကိုကြည့်ရှုဖို့ Active Directory - ထို ကြည့်ရန် menu ကို (ကြည့်ရန်) သွားခြင်းအားဖြင့်အဆင့်မြင့် mode မှာ - (အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ပျူတာ Active Directory) အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ပျူတာ နဲ့ နောက်ထပ် features တွေ (အဆင့်မြင့် Features) ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
Nvidia မောင်းသူကို install လုပ်မထားဘူး - Setup ကိုပျက်ကွက် | ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
မင်္ဂလာပါရှိသမျှတို့ကိုငါဝတ်စုံများ၏ Compatibility ကိုစစ်ဆေးနေအခါ, update လုပ်ဖို့စတင်, Nvidia site မှ updates များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်, တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုကဒ်ကို Nvidia GT550 ဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းစတင်တစ်ဝက် installation ကိုယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ပျက်ကွက်ဂရပ်ဖစ်ကို install လုပ်မထားဘူးဆိုတာဖျောပွပွီးနောကျပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးဿုံမဆို version ကို စုပေါင်း.